Iindaba zeGeo-Engineering-Unyaka kwiziseko zophuhliso-YII2019 -Geofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/Iindaba zeGeo-Engineering-Unyaka kwiziseko zophuhliso-YII2019
Kule veki umcimbi ubanjelwe eSingapore Ingqungquthela yeNkomfa yeZiseko zoNyaka - I-YII 2019, Umxholo wawo ophambili ugxile kukuya kwidijithali kugxilwe kumawele edijithali. Umsitho ukhuthazwa ziiNkqubo zeBentley kunye namahlakani acwangcisiweyo eMicrosoft, iTopcon, iAtos kunye neNokia; Kumanyano olunomdla endaweni yokwabelana nje ngezenzo, bakhethe ukunika izisombululo ezongezwe kunye kunye kwisakhelo sendlela yenguqulelo yesine yemizi mveliso esetyenzisiweyo kubunjineli be-geo, ngakumbi kwimimandla yobunjineli, ulwakhiwo, imveliso yemizi-mveliso. kunye nolawulo lwezixeko zedijithali.
Izixeko, iinkqubo kunye nabemi.
Ngokwam, emva kweminyaka eli-11 yokuthatha inxaxheba ngamaxesha athile njengonondaba okanye ijaji kulo msitho, iiforamu zeshishini yeyona nto ndiyixabisileyo. Hayi kuba into entsha ifundwa ngokuthe ngqo, kodwa ngenxa yokuba olu tshintsho lusivumela ukuba sibone apho izinto zihamba khona. Akukho nto ingenzeki kwamanye amashishini, kodwa kulo nyaka kukuqhelaniswa neenkqubo kunye nabemi njengeziko lokuqwalaselwa. Ayizothusa into yokuba zonke izixhobo ze-IT zale nkampani zenziwe lula kwezi zihloko, kwimodeli ekwabelwana ngayo kunye nokusebenza kweqonga.
Iiforamu ezintandathu zalo msitho zezi:
Izixeko zeDijithali: Kulo nyaka yeyona nto ndiyithandayo, endizimisele ukuyibuyisela umva ngokuthe ngqo kolu khuphiswano ngokuthi ii-asethi zedolophu zidlula i-GIS + BIM. Isindululo sexabiso kukubonisa iinkqubo ezixhumeneyo kunye nokuhamba okuhlanganisiweyo endaweni yezisombululo ezininzi, ezilungelelaniswe neqela leepotifoliyo esibonileyo kunyaka ophelileyo kunye nokufunyanwa okutsha endaweni yokuba sicinge ngokudityaniswa kweemodeli zolawulo lwedatha yobunjineli. kunye ne-geospatial, bafuna ukwenza ukuba kube lula ukwenza imodeli yezixeko ngokwembono ebanzi, becinga ngeenkqubo zokudityaniswa kwezinto abantu abazilawulayo esixekweni: ucwangciso, ubunjineli, ulwakhiwo nokusebenza.
Amandla kunye neenkqubo zamanzi: Le foram ijolise kwimiceli mngeni kwiindlela zokuziphatha zokusetyenziswa kwezixhobo kunye nokulungiswa kweemeko zokugcina ukukhula kwebango. Ixabiso lokubheja kukuba izigqibo ezingcono zinokwenziwa njani kulawulo olupheleleyo lwenethiwekhi yokuhambisa, ukubonelela ngolawulo oluzenzekelayo.
Iindlela zikaloliwe nohambo: Iindlela ezizenzekelayo zokwakha, ulwazi olukhawulezileyo lokwenza izigqibo, ulawulo lwegalelo kunye nonciphiso lweendleko phantsi kolawulo lomjikelo wobomi beempahla ezikhoyo kunye nokwandiswa okusekwe kuhlumo lwedolophu kuya kuxutyushwa apha.
Ikhampasi kunye neZakhiwo: Le foram ifuna ukuxoxa kwaye ibeke umngeni wokulinganisa amaxesha kunye nokuhamba kwabantu. Ukongeza, ukuba ulawulo lwedijithali lunokukhokelela njani kutshintsho lwezisombululo zokuhamba ezidolophini.
Iindlela kunye neebhuloho: Oku kuyakubonisa ukuba ungayila kanjani kwakhona iinkqubo zokwakha kunye neenkqubo usebenzisa iindlela zokwakha kwidijithali kunye nokulinganisa.
Ulwakhiwo lwamashishini: Le iforum evuthiwe ngokufanelekileyo kwizisombululo zePlatSight ekusebenzeni kweeprojekthi ezifanelekileyo kwiirhasi, ioyile neenkqubo zemigodi.
Ibe yimfundiso ebalaseleyo ukuba inkampani eyayilawulwa lusapho, endaweni yokuya esidlangalaleni, yacebisa ukomeleza iiasethi zayo ukuze ithathe ubuchule bayo ukuya kuguquko olulandelayo kushishino, ibambisene neenkampani eziphambili ubunjineli (iTopcon), ukusebenza (i-Nokia) kunye nokunxibelelana (iMicrosoft). Kwiminyaka yakutshanje sabona ukuba yeyiphi iProjekthiWise eza kuba nakho ukufikelela kwinethiwekhi yeAzure, kunye nePlantSight kuyo yonke imakethi yokuvelisa imveliso.
Kulo nyaka, ukumangaliswa akukhange kube kuncinci, ngokudibeneyo kweBentley Systems - iTopcon, kugxilwe ekudaleni iindlela ezintsha zokwakha ngokusekwe kwitekhnoloji kunye nenkqubo yokwenza lula. Esi sisombululo asiphumanga emkhonweni wehempe, kodwa sisiphumo sophando kunye nentsebenziswano yabathathi-nxaxheba abangaphezulu kwama-80 phakathi kwemibutho yaseburhulumenteni, iinkampani zabucala kunye neengcali ezazisele zisebenzisa izisombululo ze-IT, izixhobo, iinkqubo kunye nokulunga iinkqubo kumjikelo wobomi weeprojekthi zeziseko zophuhliso ezinkulu. Oku kulawulwa Iziko leMfundo lokwakha, kwaye isiphumo Umsebenzi Wokwakhiwa kwedijithali DCW
Imisebenzi yokwakha edijithali, Kuvuleleke kuzo zonke iintlobo zamashishini kwimeko yoluhlaziyo lwesine lwezemveliso, kodwa ngokukodwa kwicandelo lezokwakha, iinkampani zingaziphucula iiprojekthi zazo zokwakha-kusetyenziswa ukujikeleza kokusebenza kwedijithali - ngokusebenzisana neqela leengcali. ka DCW, yona eya kubonelela nge-automation yedijithali kunye nenkonzo ebizwa ngokuba yi "twinning".
Ukuba le nto iphawuleka yenziwe yenziwa phakathi kwenkampani yabathengi, Imisebenzi yokwakha eyidijithali, IBentley kunye neTopcon, zona, ziya kufuna ukubeka phambili utyalo-mali lwazo ngokubhekisele kuphuculo kunye nokuyilwa ngokutsha kwesoftware yobunjineli bokwakha. UGreg Bentley, umphathi we-Bentley Systems akakwazanga ukuyibeka bhetele:
“Xa i-Topcon kwaye saqaphela ithuba lokuba i-Constructioneering ekugqibeleni ivelise ukuhanjiswa kweeprojekthi ezinkulu, siye sazibophelela ekugqibezeleni iimfuno zesoftware. Ngapha koko, amandla ethu esoftware amatsha akwenza kube nokwenzeka ukwakha amawele edijithali: umxholo wedijithali odibeneyo, amacandelo edijithali, kunye nexesha ledijithali. Into eseleyo, njengoko ulwakhiwo lweziseko ezingundoqo luhamba ngedijithali, kukuba abantu kunye neenkqubo zabakhi bathathe ithuba lobuchwephesha. Thina kunye ne-Topcon sizibophelele ezininzi zezona zixhobo zingcono, ulwakhiwo olunamava kunye neengcali zesoftware, ukukhonza igxalaba negxalaba, kwii-headsets ezibonakalayo, ukuqhubela phambili ngokuyila udibaniso lwedijithali olufunekayo. Ishishini elihlanganyelweyo leDigital Construction Works linolawulo olupheleleyo kunye nezibophelelo zenkunzi zeenkampani zethu ezimbini, zisebenzisa amandla azo awodwa ukunceda ukuhlanganisa amandla e-Constructioneering ukuvala umsantsa weziseko zophuhliso zehlabathi.
Okungakumbi okuvela kumawele edijithali
Umbono weDijithali yamawele uvela kwinkulungwane ephelileyo, kwaye nangona ibingavuswa njengefad, inyani yokuba iinkokheli zeshishini ezinempembelelo kubuchwephesha nakwimakethi ziyisusa kwakhona, iqinisekisa ukuba iyakuba yinto engenakuphinda ibuye. I-Digital Twin ifana kakhulu nenqanaba 3 lendlela ye-BIM kodwa ngoku kubonakala ngathi iya kuba yiyo Imigaqo yeGemini eya kuphawula umgca wendlela.
Kwi-ProjectWise 365 uhlaziyo -lusebenzisa iMicrosoft 365 kunye netekhnoloji esekwe kwi-SaaS- iinkonzo ezisekwe kwiwebhu-ilifu- kunye nokusetyenziswa kwedatha ye-BIM iyandiswa, ivumela iinkonzo ezinje nge-iTwin ukuba ihlale ikho kuzo zonke iintlobo zohlaziyo kunye kuwo onke amanqanaba azo zonke iintlobo zeenkampani. Ngendlela ebanzi, ngeProjekthiWise 365 abo babandakanyekayo kwiprojekthi banokulawula yonke into enxulumene neprojekthi (uyilo lwevenkile, ulawule ukuqubuka kokusebenza, okanye utshintshiselane ngomxholo).
Abasebenzisi -professionals- banokufikelela kuPhononongo loYilo lwe-iTwin, ukuze banxibelelane neprojekthi ngendlela egwenxa, ukuzula phakathi kwe-2D kunye nembono ze-3D. Ngoku, abo baya kusebenzisa esi sixhobo kwiiprojekthi, ngokudityaniswa kweProjekthiWise, kunokwenzeka ukuba batshintshe amawele edijithali yeprojekthi, bagcina umkhondo wokuba kwenzeka nini kwaye kwenzeka nini utshintsho. Zonke ezi mpawu ziya kufumaneka kamva kulo nyaka 2019.
“Amawele edijithali eprojekthi yokwakha kunye nobunjineli beziseko ezingundoqo aqhubela phambili nezi zibhengezo, ngakumbi ngeenkonzo zethu ezintsha zamafu. Abasebenzisi beProjectWise, #1 yesoftware ye-BIM yentsebenziswano kuphononongo olutsha lwemalike ye-ARC, benze iBentley ibe yenye yabasebenzisi abakhulu bee-Azure ISVs. Sandisa iinkonzo zethu zelifu ezisekwe ngoko nangoko kwiwebhu yeProjectWise 365; yenza iinkonzo zelifu ze-iTwin zifumaneke ngokubanzi kuzo zombini iingcali kunye nophononongo loyilo lwenqanaba leprojekthi; kunye nokwandisa kakhulu ukufikelela kwe-SYNCHRO ngeenkonzo zamafu. Unikezelo lweeprojekthi zeziseko ezingundoqo lusekwe ngokusisiseko kwixesha, kwakunye nendawo. Iprojekthi ye-4D ka-Bentley kunye nokwakha amawele edijithali aqhuba ukuqhubela phambili kwedijithali kubunjineli beziseko zophuhliso, namhlanje, kwihlabathi jikelele! ” UNowa Eckhouse, usekela mongameli ophezulu wonikezelo lweprojekthi yeBentley Systems
Ngokubhekisele kwiinkonzo zamafu I-SYNCHRO Abasebenzisi beeNkqubo zeMigangatho banokuvelisa iimodeli zokulawula ukwenziwa kweeprojekthi, idatha ebaleni okanye eofisini, kunye nokujonga yonke imisebenzi, iimodeli kunye neemephu ezikhuthaza ngokufanelekileyo ukubanjwa kwedatha kunye nokunciphisa umngcipheko wokuvela izehlo ezithile Kuzo zonke ezi zinto zilapha ngasentla, ukudityaniswa kwento yokwenene ukungqinisisa kunye neMicrosoft Hololens 2 yongezwa, okubangela ukubonwa kwe4D yoyilo lweprojekthi, oko kukuthi, ukubonwa kwe4D ngamawele edijithali.
Ukufumana izinto ezintsha
Intsapho ye-900 Systems idibanisa iitekhnoloji enjengeSoftware yokuShukumiseka kweHlabathi (i-CUBE) - Iicitilabs, uhlahlelo
Ezi zinto ziyinxalenye yetekhnoloji ehlanganisiweyo, apho ukucwangciswa kwedijithali kungaphuculwa khona. Ukufumana idatha kwiidolophu ngokusebenzisa i-drones, esekwe kwi-4D - i-Orbit GT- i-topografics, ukufaka idatha kwizicelo ezinje ngeeNdlela eziVulekileyo- i-900 kunye nokwenza izifaniso ngeCUBE, ingqokelela yedatha ye-asethi ekhoyo ifunyenwe kwaye ikufutshane Yakhelwe, apho ke ilizwe lokwenene lixeliswa.
Imodeli yokwenyani ngezi zixhobo, ivumela ukuchonga inqanaba kunye nokusebenza kwezakhiwo kunye neziseko zophuhliso, - le yenye yeenjongo zokuthengwa kwezinto. Emva kokufumana yonke idatha yenyani, kunye nenkonzo yefu yeWindows, abo banomdla banokufikelela kule datha, eqinisekisa amawele edijithali.
“Siyavuya ukuba yinxalenye yeBentley Systems. Abathengi bethu kunye namaqabane baya kuba nethuba elihle lokudibanisa ngokupheleleyo ukucwangciswa, ukuyila kunye nokusebenza kweenkqubo zokuthutha ezininzi. E-Citilabs, injongo yethu ibikukwenza ukuba abathengi bethu basebenzise idatha esekwe kwindawo, iimodeli zokuziphatha, kunye nokufunda koomatshini ngeemveliso zethu ukuqonda kunye nokuqikelela intshukumo kwizixeko zethu, imimandla kunye nezizwe. kunye nohambo oluqikelelweyo lokuphucula uyilo kunye nokusebenza kweenkqubo zokushukuma zangomso." UMichael Clarke, uSihlalo kunye ne-CEO ye-Citilabs
Ngamafutshane, iveki enomdla isilindele. Siza kupapasha amanqaku amatsha kwezi ntsuku zilandelayo.
Ukudityaniswa koyilo-ukuzinikela kwi-BIM ephucukileyo ngokusebenzisa amawele eDijithali